N-GUN JA WA: မြန်မာပီအာစနစ် Permanent Resident Card (Green Card) in Myanmar
A permanent residence card is the solution for people who wish to regularly visit to stay in Myanmar foralonger period. It is perfect for people that wish to retire in Myanmar and for other people who want to stay in Myanmar withoutawork permit.
At point c, item 1, article 13 Ordinance on immigration, migration, residence of foreigners in Myanmar dated 28th April 2012, foreigners who are temporarily residing in Myanmar in one of following cases are considered and approved of permanent residence:
Wife, husband, child, father, mother of Myanmar citizen permanently residing in Myanmar
Permanent Residence Card has unlimited validity, every3years, the card holder will have to update their Permanent Residence card. The card holder also can use this card as an unlimited visa to come to Myanmar.
Diplomatic note of competent public authority of the country where such person isacitizen requesting for approval of such person’s permanent residence in Myanmar (Attached withatransfer note of Myanmar diplomatic agency).
02 copies of documents to prove being wife, husband, child, father, mother of Myanmar citizen permanently residing in Myanmar.
02 guarantee letters for foreigners temporarily residing in Myanmar (Form N9) confirmed by People’s Committee of ward, commune, attached with 02 copies of Identity card, family record of the guarantor. The guarantor and the guarantee must show documents to prove having legal houses or legal financial sources to ensure having house and life for the guarantee.
Above documents (except for application for permanent residence, diplomatic note, passport, visa) must be translated into Myanmar and certified or legalized as regulated.
If you don't believe - see the reference:
မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများ အခက်ခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အလွန်ပြန်ချင်ပေမဲ့လည်း ဗီဇာအခက်အခဲကြီးက တိုးလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။
၁။ အစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းများကို ဝန်ထမ်းပြေးလို့ သတ်မှတ်ပြီး လာဘ်တောင်းနေတဲ့ လေဆိပ်၊ ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာများရှိပါသေးတယ်။
၂။ ပညာတော်သင် ထွက်သွားပြီး ပြန်မလာသူများကိုလည်း နိုင်ငံတော်စီးပွားပျက်စေတဲ့အမှုမျိုး (နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုပြီးရင် အမြင့်ဆုံးအပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့ပုဒ်မနဲ့) စောင်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
၃။ နိုင်ငံခြား ကျောင်းတက်၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ ထွက်ခွာရင်း ပြည်ပနိုင်ငံသားအဖြစ် မဖြစ်မနေ ခံယူလိုက်ရသူများ
အစရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာသူများကိုလည်း ဗီဇာလျှောက်ရင် ဟိုကြပ်သည်ကြပ်နဲ့၊ တချို့ဆို သံရုံးအင်တာဗျူးမှာ အနိုင်ကျင့်မေးခွန်းတွေမေးပါတယ်။ မခံနိုင်လို့ ပြန်ပြောရင် ဗီဇာမပေးပဲ ညစ်ထားတဲ့ သံရုံးစည်းမျဉ်းတွေ မကျော်နိုင်သေးပါဘူး။ ဗီဇာလာလျှောက်သူကို..ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံရပါသလဲ၊ ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်က စွန့်ရပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း၊ အင်တာဗျူး... မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ဗီဇာရပြီး မြန်မာပြည်တွင်းဝင်သွားရင် နောက်ခံဘက်ဂရောင်း မရှိပါက ပြည်တွင်းမှာ အနိုင်ကျင့်ခံရပြန်တယ်။ အနည်းဆုံး လေဆိပ်အထွက် အင်မီဂရေးရှင်းမှာ ဟိုမေး၊ သည်မေးနဲ့ လုပ်ချင်တာမျိုးတွေ ရှိနေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကျောင်းသားများ သိစေရန် ။
ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ မပါရှိ စေရ ။ တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်များသာ ဖြစ်သည် ။ ရန်သူ့ထံ ဒူးထောက် အညံ့ခံချင်း မဟုတ်ပါ ။ တိုက်ပွဲက မပြီသေးပါ ။ ကားပါမစ်လဲ မယူပါ ။ ဆက်လျှက် ချီတက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပူးပေါင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည် ။
ကျနော်နဲ့ ဆက်သွယ် ပါရန် ။
နယ်သာလန် ( ဟော်လန် )
ဖုန်း - 0031302011015 ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း၊ ဦးစိုးသိမ်းတို့ နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီး ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလောက်ဆို မြန်မာပီအာ Permanent Resident စနစ်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် ..ပြောကြားချက်များ အခုအခါ အကောင်ထည်မဖေါ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီတော နိုင်ငံခြားက မြန်မာများ ပြန်လာရင် မတရားညစ်ပြီး၊ အာဏာပြ၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ လေဆိပ်အထွက်ကျမှ နောက်နေ့လေယာဉ်နဲ့ပဲ လိုက်ပါ အစ်ကို/အစ်မ လို့ပြောပြီး ချန်ထားရစ်စေခြင်းများ၊ လာဘ်တောင်းဖို့ ကြိုးစားခြင်းများအတွက့်မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက လုပ်ပေးဖို့လိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်သူများ မြန်မာပြည်အလည်ပြန်လိုရင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုဆီ ကြိုတင်စာရင်းပေးထားပြီး လေဆိပ်က တရားဝင်လာကြိုတဲ့အထိ လုပ်ပေးဖို့ လိုနေပါပြီ။
အထူးသဖြင့် ပြိုလဲနေတဲ့ မြန်မာ့တရားရုံး၊ တရားဥပဒေနဲ့ လူတွေကို ငွေညှစ်တတ်သူများ လုပ်စားနေချိန်မှာ၊ ပြည်ပက အလည်ပြန်လာမဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ကူညီဖို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လိုနေပါတယ်။ အကြံအဖန်အဖွဲ့လည်း မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ UN, EU refugee အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်နိုင်ရင်တော့ အတိုင်းထိ အလွန်ပါပဲ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ ကြေငြာချက်ကတော့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ အလွန်အရေးကြီးလှတဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူတဲ့ ဗီယက်နမ်ပြန်လာသူများအတွက် ပီအာစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလို့ အမည်ပြောင်းလိုက်ခြင်းဟာ မျှော်လင့်ချက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....။
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဘာကြောင့် နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲ – အပိုင်း (၃)
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁) - ညိုမင်း